Maxaad ka taqaan Beerta Xuriyada ee Magaalada Jigjiga
Beerta Xuriyadda waa College Caafimaad oo ay ku xareesan yihiin Wilal iyo Gabdho badan oo Soomaali ah, waxaana magacan Beerta Xuriyada u bixiyay wiil Soomaaliyeed kaddib markii uu u bogay Gabdhaha gala xeradaas oo uu arkay dhalin badan oo xeradaas oo haasaawe tagaysa.
Xeradan Beerta Xuriyada ayaa waxaa ku nool gabdho iyo wiilal badan oo heerka tacliinta meelo kala duwan maraya, waxaana halkaas habeen walba u haasaawe taga dhalin gaadhaysa ugu yaraan labaataneeyo oo isugu jira wiilal iyo gabdho.
Xeradan oo Ku taalla cidhifka Magaalada Jigjiga ayaa waxay dhalin yarta u haasaawe tagtaa ay tagaan habeenkii, halkaas oo ay kula kulmaan qof kasta rafiqisii, iyadoo ay sidaa tahay haddana xeradu waxay leedahay Waardiye ama Waashmaan ilaaliya, siiba Qaybta Gabdhaha waxay leedahay waardiye u gaar ah oo kala ilaaliya wiilasha iyo gabdhaha wakhtiga habeenkii, oo mar haddii ay habeen gaadho lama oggola wiil iyo gabadh inay ku kulmaan xerada dhexdeeda xitaa haddii ay ardayda ka mid yihiin,waana midda kaliftay inaad aragtid lammaanayaal isla taagan meelo ka baxsan xerada.
Dhalin yarta ku jirta xeradan ayaa isugu jira kuwo sheeko badan iyo kuwo aamusan. ninba sida uu dabcgiisu yahay, Marka aad u gashid Qaybta gabdhaha waxaad la kulmaysaa soo dhawayn aad u sarraysa iyadoo gabadh kastaa oo xeradaas gasha ay leedahay soo dhawayn iyada gaar u ah. matalan gabadhaha xerada gala qaar waxay kugu soo dhawaynayaan Sharaab noocyadiisa kala duwan, qaarna sheeko macaan oo wakhtigaba kaarida ayay kugu soo dhawaynayaan.
Haddaba xeradan ay dhalin yartu ula baxeen Beerta Xuriyada ayaa u qalanta magacaas waxaana garan kara qofkii tagay xeradaas oo arkay dhalin yarta ku nool
Designed by Wiiljacayl